Malaimbady : ravan’ny zandary ny fakana an-keriny · Aponga
Malaimbady : ravan’ny zandary ny fakana an-keriny
Ankizy 14 taona nalain’ny jiolahy an-keriny tany Soatanimbary Atsimo Malaimbandy, ny zoma lasa teo, tamin’ny 6 ora maraina. Ravan’ny zandary mpanao «opérations» ora vitsy taorian’ny nitrangan’izany ity fakana an-keriny ity. Avotra ilay zaza ary tsy nisy vola azon’ireo andian-jiolahy.
Araka ny fanazavana, jiolahy ampolony nitondra basim-borona no tonga vao maraina tao an-toerana naka io zaza io. Niantso haingana ny zandary ny mponina no sady efa nanara-dia ka nidina avy hatrany nanao ny fanarahan-dia nifanampy tamin’ny mponina sy nanao ny fanakanana ireo jiolahy ireo ny avy ao amin’ny Groupement Menabe sy ireo mpanao «opérations».
«Nahalala ireo jiolahy ireo fa voafehin’ireo zandary ny toe-draharaha ka efa voatery sy voahodidina izy ireo. Nandositra sisa no hany nataony ary navotsony ilay zaza tao Ambalatandroy Malaimbandy tokony tamin’ny 2 ora tolakandro», hoy ny zandary . Tsy nisy fotoana nangatahana vola ireo mpaka an-keriny noho ny hafainganan’ny hetsika, satria haingana ihany koa ny fampandrenesan’ny mponina azy. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ny olon-dratsy ireo izay efa fantatra ny ankamaroany.
«Araka ny efa nambara, misy ny ezaka handravana ny fikambanan-jiolahy any Malaimbandy. Mbola mitohy ary hotohizana hatrany io ady amin’io asa ratsy io na efa tsy afa-nanao toy ny fanaony teo aloha intsony aza ireo jiolahy ireo. Maro ireo efa any am-ponja, toa izany koa ireo efa tsy atahorana hanao ny asa ratsiny intsony, kanefa mbola mikasa hanandrakandrana ny hanohy izany ihany ireo namany sisa mbola misitrika sy efa karohana», hoy ny zandary hatrany.